Insectivores: I-Animal Encyclopedia
Insectivores (Insectivora) liqela lezilwanyana ezincelisayo eziquka i-hedgehogs, inyanga, i-shrews, kunye ne-moles. Izibhedlele zivame ukuba zizilwanyana ezincinci kunye nemikhwa yokuhlwa. Kukho iintlobo ezingama-365 zezinambuzane eziphilayo namhlanje.
Uninzi lwezinambuzane lunamaso amancinci kunye neendlebe kunye ne-snout ende. Abanye abanalo iindlebe ezibonakalayo kodwa ziba neengqiqo zokuva. Baye bawabetha iinzwane kwiinyawo ngasinye kwaye umzekelo kunye nenani lalawo mazinyo lincinci.
Ezinye iinambuzane ezifana ne-otter-shrews kunye neenyanga ziba nomzimba omde. I-Moles ine-body cylindrical and hedgehogs inomzimba ojikelezayo. Ezinye iinambuzane ezinjengeemithi ezinomthi kunye neziqhwala zihamba ngokunyuka kwemithi.
Insectivores ithembele ngakumbi kwindlela yokuphosa, ukuva, nokuthinta umbala ngaphezu kwemibono yabo kunye nezinye iintlobo zeentlobo ezinokuthi zikwazi ukuhamba ngokusingqongileyo ngokusebenzisa i-echolocation. Amathambo entendeni yangaphakathi yezinambuzane azifani nezinye izilwanyana. Abanalo ithambo lexesha elingasondelanga kunye nomlenze we-tympanic uqhotyoshelweyo kwindandatho ye-tympanic ngelixa indlebe yabo ephakathi ivalwe ngamathambo azungezile.
Intshutshiso zihlala kwindawo yokuhlala emhlabeni jikelele. Ukongezelela, ezinye iintlobo zezinambuzane zihlala kwiindawo zasemanzini ngelixa ezinye zihamba.
I-Moles ichitha ixesha layo elingaphantsi kwehlabathi kwimigudu yabo. Izilwanyana zihlala ngaphaya komhlaba kwaye zakha imingxuma yokulala kunye nokulala.
Ezinye iindidi zihlala kwiindawo ze-boggy apho kukho izilwanyana, ukubola kunye neengodo zokubola. Ezinye iintlobo zihlala kwiindawo ezimeleyo ziquka iindawo zokuhlala. I-Moles ne-shrews zihlala zisebenza rhoqo kulo nyaka.
I-Hedgehogs iqondwa ngokulula ngokubunjwa kwayo kunye neentsiba. Iintsiba zabo ziquka i-keratin enzima kwaye zikhonza njengendlela yokukhusela.
Xa usongelwa, iinqwelo ze-hedgehogs ziqhubela kwibhola enqabileyo ukuze izihlunu zazo zivezwe kwaye ubuso babo nesisu sekhuselwe. IiHedgehogs zihlala zihlwa.
Njengoko igama labo lithetha, iinambuzane zondla kwizinambuzane nakwezinye izilwanyana ezincinci ezinjengeengcambu kunye nezibungu. Sekunjalo ukutya kweentlobo ze-insectivores akukhawulelwanga kuma-invertebrates kwaye kubandakanya iintlobo ezahlukeneyo zezityalo nezilwanyana. Amanzi amancinci atya iintlanzi ezincinci, ama-amphibians kunye nama-crustaceans ngelixa ama-hedgehogs atya kwiinyama zeentaka kunye namazinyane amancinci.
Zininzi iintlobo zezinambuzane zifumana ixhoba zazo zisebenzisa ingqiqo ephosakeleyo okanye ngokusebenzisa imvakalelo yazo. I-mole ekhwelwe yenkwenkwezi, umzekelo, ingekona nje ingqondo ephilileyo, inayo neempumlo ezininzi ezincinci ezinokuthi zifumane kwaye zithinte ixhoba labo.
Izilwanyana > Iziqhamo > Izilwanyana> Izilwanyana
Kukho iinqunjana ezine eziphilayo ezizinambuzane. Ezi ziquka i-hedgehogs, inyanga kunye neendlela zokuzivocavoca (Erinaceidae); i-shrews (i-Soricidae); i-moles, i-moles nemithi (Talpidae); kunye ne-Solenodon (Solenodontidae). Iingcitivores zicingelwa ukuba zihlobene kakhulu kunye nezilwanyana, izilwanyana ezinamafutha kunye nama-carnivores.
Ukwahlula kwezinambuzane akuqondwa kakuhle.
Insectivores inomzimba wezilwanyana zamandulo kunye neendlela ezininzi zokubonakala kwazo. Ngenxa yalesi sizathu, iinambuzane zihlatyathwe kwezinye iindidi ezilwanyana ezinokudlulayo kwixesha elidlulileyo ezifana nomthi womthi okanye iintambo zeendlovu. Ukongezelela, ezinye izibonakaliso zengxubevange yezinto ezixhamlayo ziguqulwa ngokulungelelaniswa kwamanye amaqela-into eqhubekayo idibanisa ukubeka ngokufanelekileyo inambuzane phakathi kwezilwanyana.
Iiplani zokuhlaziywa zangaphambili emva kokubeka iintlobo zemithi kunye neendlovu zeendlovu kwizinambuzane kodwa namhlanje zihlelwa ngokwazo ngokwazo. Kungenzeka ukuba amanye amaqela ezilwanyana afana nama-moles egolide angasuswa kwiindawo ezizinzileyo njengoko ulwazi olutsha luza kukhanya.
Iinqununu zibhekwa njengamaqela amancinci amaninzi.
Ezinye iimpawu zokuqala ezinokungabonakaliyo ezibonakalayo zibandakanya iincinci ezincinci kunye nezivivinyana ezingahlali kwi-scrotum.
10 Amazwi NgamaDolphins
Ukulwa kweNqanawa yeeNqanawa ezithintekayo kwenzani iJamani ukuba ilahle iWWI
I-Pokemon I-Movie: I-Hoopa kunye neClash of Ages (iDVD)
Isihlabathi (isiNgesi uLwimi)
Umculo kumaMingcwabo angamaKristu kunye neeNkonzo zeSikhumbuzo
Iimbono zePone-Pone Opinions, nguMark Twain